Basa reECG reApple Watch rinotenderwa muAustralia | Ndinobva mac
Basa reECG reApple Watch rinotenderwa muAustralia
Kana chinhu chimwe chave pachena nezve Apple Watch, ndiko kugona kwazvinofanira kuita kudzivirira mamwe matambudziko ehutano mune vamwe vanhu vanogona kunge vari kutambura nemoyo kana matambudziko akafanana. Basa re electro cardiogramKunyangwe, sekutaura kweApple, isingaone kurwisa kwemoyo, kana ichigona kuona mamwe matambudziko uye kudzivirira ramangwana chirwere chemwoyo. Iri basa rakapararira munyika dzakasiyana uye ikozvino zvakatonyanya kupfuura Australia yakazvibvumidza.
Australia, ichangobva kubvumidza kuunzwa kweApple Watch Irregular Pace Notification, yakabvumawo inosanganisira basa reECG muAustralia Therapeutic Goods Register (ARTG). Aya ndiwo marongero akaitwa kuiswa kweichi chiitiko mumaregista.
Iko ECG kunyorera isoftware nhare yekurapa yekushandisa iyo yakagadzirirwa kushandiswa neApple Watch. Kugadzira, kurekodha, kuchengeta, kuendesa uye kuratidza imwechete chiteshi electrocardiogram (ECG) yakafanana neinotungamira I ECG. inosarudza kuvepo kweatrial fibrillation (AF) kana sinus rhythm mune yakasarudzika waveform. Iyo ECG application haina kukurudzirwa kune vashandisi vane mamwe anozivikanwa arrhythmias. Yakagadzirirwa yekushandisa-pamusoro-iyo-kadhi (OTC) kushandiswa. Iyo ECG dhata inoratidzwa neECG kunyorera inoitirwa kuitira ruzivo rwezvinangwa chete. Mushandisi haafanire kuturikira kana kutora matanho emakiriniki zvichibva pane zvakabuda muchigadzirwa pasina kubvunza nyanzvi inokwanisa yehutano
Aya mashandiro anga aripo kweanopfuura makore maviri, kubvira mashandisiro ayo akatenderwa muUS. Kubva ipapo yakagamuchirwa mune dzimwe nyika sedzedu. Icho chinhu chinofanirwa kutorwa nekuchenjerera asi chinonyanya kubatsira mune dzimwe nguva. Rangarira kuti Apple Watch Series 4 kana gare gare inodikanwaAsi iyo irregular beat ziviso inoshanda nechero wachi inomhanya watchOS 5.1.2 kana gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Basa reECG reApple Watch rinotenderwa muAustralia
Kana iyo MagSafe yekubatanidza ikasvika kune iyo iPhone, inogona kudzokera kuMac, handiti?
Kutongwa pakati peApple neEpic Mitambo kunonoka kusvika Chivabvu 3.